Maxey yihiin caqabadaha ay la kulmi karto doorashada? | KEYDMEDIA ENGLISH
Maxey yihiin caqabadaha ay la kulmi karto doorashada?
Caqabado dhowr ah ayaa xilligan hor istaagi kara, in doorashada aqalka hoose ay ku soo idlaato waqtigii loo asteeyey ee ahaa 25-ka bisha february.
MUQDISHO, Soomaaliya- Qubarada sida dhaw ula socota, xaaladda siyaasadda dalka ayaa sheegaya, in doorashada gollaha shacabka, ay wajihi doonta dhowr caqabadood, taas oo diideysa in ay ku soo idlaato waqtigii loo qorsheeyey.
Arrinta ugu walaaca badan, ayaa ka imaneysa hannaanka deggaan doorashada, oo aan wax ka baddel lagu sameynin, waana labbo deggaan doorasho, taas oo adkeyn karta in doorashadu ay ku hirgasho waqtigii loo qabtay.
Maamullada badankood, sababi amni awgeed ma tagi karaan deggaanada ay ka arrimiyaan ee doorashada lagu qabanayo, waana caqabad kalifeysa in dib loogu laabto heshiiskii gollaha wadatashiga.
Qubarada qaarkood ayaa ku doodaya, in magaalooyinka Boosaaso, Garbahaareey, iyo Baraawe, caqabado kala duwan oo ka jira awgeed, aysan suura gali karin in doorasho lagu qabto, iyagoo hoosta ka xariiqay in waqtiga la qorsheeyey, uu aad u kooban yahay marka la eego culeysyada siyaasadeed ee dalka ka jira.
Boobka doorashada ee dib u billawday, ayaa mar kale laga yaabaa, inuu hor istaago doorashada gollaha shacabka, waana arrin mugdi galineysa ififaalaha laga qabay doorashooyinka dalka.
Tabashada ay qabaan beelaha kuraastii hore loo boobay, ayaa iyaduna noqon karta caqabad jalaafo u dhigta, heshiiskii doorashada ee ay dhawaan gaareen gollaha wadatashiga.
Si kastaba, doorashada gollaha shacabka ayaa dib u billaabatay, iyadoo huwan boob uu la socdo boobsiis, waana arrin wal wal ku abuurtay shacabka Soomaaliyeed oo rajeynayey, in mar un dalku ka baxo xilliga kala guurka ah.